अश्‍लील सामग्री हेर्ने बानी कसरी त्याग्ने अनि किन? | किशोरकिशोरी
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अब्खाज अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उम्बुन्डु उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओसेसियन काबुभरदियानु किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गा ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिभ डच डेनिश तामिल तेलगु त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
अश्‍लील सामग्री वास्तवमा के हो, बुझ्नुहोस्। यौनसम्बन्ध पतिपत्नीबीच मात्र हुनुपर्ने आदरणीय सम्बन्ध हो। तर अश्‍लील सामग्री हेर्नु भनेको यस्तो सम्बन्धको घोर अनादर गर्नु हो। यो कुरा थाह पाउँदा तपाईंले “ खराबीलाई घृणा ” गर्न सक्नुहुनेछ।—भजन ९७:१०.
परिणाम सोच्नुहोस्। अश्‍लील फोटो र भिडियोमा देखाइएका मानिसहरूलाई कसैले आदर गर्दैनन्‌। न त त्यस्तो सामग्री हेर्ने व्यक्ति नै आदरणीय हुन्छ। त्यसैले बाइबलमा यस्तो सल्लाह दिइएको छ, “चतुर मानिस दुःख आएको देखेर जोगिन्छ, तर सीधा-साधा त्यसमा पर्छ र दण्ड भोग्छ ।”—हितोपदेश २२:३.
वाचा बाँध्नुहोस्। परमेश्वरका भक्त अय्यूबले यसो भने, “ कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरा आँखासित वाचा बाँधे ।” (अय्यूब ३१:१, पवित्र बाइबल, नयाँ संशोधित संस्करण) आफैसित निम्न वाचाहरू बाँध्नुहोस्:
एक्लै हुँदा म कहिल्यै पनि इन्टरनेट चलाउनेछैनँ।
इन्टरनेटमा आफसेआफ देखा पर्ने साइट वा छाडा साइट आउँदा तुरुन्तै बन्द गर्नेछु।
अश्‍लील सामग्री हेर्ने बानी दोहोरियो भने परिपक्व साथीसित कुरा गर्नेछु।
अश्‍लील सामग्रीले समस्या बढाउँदै लैजान्छ—जति हेर्नुहुन्छ, त्यत्ति नै त्यसबाट मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ
प्रार्थना गर्नुहोस्। भजनसङ्‌ग्रहका लेखकले यहोवा परमेश्वरलाई यस्तो बिन्ती गरे, “ व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखा फर्काइदिनुहोस् ।” (भजन ११९:३७) तपाईं अश्‍लील सामग्री हेर्ने लतबाट मुक्त भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईंले सही काम गर्ने बल पाउनुहुनेछ।—फिलिप्पी ४:१३.
कसैसित कुरा गर्नुहोस्। यस्तो कुलतबाट मुक्त हुने महत्त्वपूर्ण कदम विश्वासिलो साथीसित कुरा गर्नु हो।—हितोपदेश १७:१७.
यो कुरा याद गर्नुहोस्: हरेक चोटि अश्‍लील सामग्री हेर्ने तलतल लाग्दा त्यसलाई काबूमा राख्नुभयो भने त्यस्तो कुलतलाई छोड्‌ने तपाईंको अठोट अझ बढ्‌दै जानेछ। यसबारे यहोवा परमेश्वरलाई प्रार्थनामा बताउनुहोस् र बल दिनुभएकोमा धन्यवाद दिनुहोस्। अश्‍लील सामग्री नहेरेर तपाईंले उहाँलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ!—हितोपदेश २७:११.
बानी तथा लत शान्ति र आनन्द युवाहरू सोध्छन्‌ किशोरकिशोरी